जुलाई 18, 2017 जुलाई 20, 2017 साइन्स इन्फोटेक0Comments मानिस
मानिस किन रुन्छ ? सामान्यतः रुन कसैलाई पनि मन पर्दैन । मानिस दुई हिसाबले रुन्छन् । एउटा खुशीमा र अर्को दुःखमा । धक फुकाएर रुँदा मन हलुंगो हुन्छ, पीडा कम हुन्छ अनि शितल हुन्छ । मान्छेको आँखाबाट आँशु आउनु कमजोर मनको उपज नभई सामान्य प्रक्रिया हो । महिला होस् वा पुरुष मनमा दुख पर्दा तथा पीडा हुँदा जो पनि रुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार रुनु मान्छेको स्वास्थ्यका लागि निकै सकारात्मक काम हो । रुने बानीले मानिसको शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पूराउने विज्ञहरु बताउँछन् । मानिस किन रुन्छ भन्नेब विषयमा व्यापक चर्चातल गरिएको छ । जीवहरुमा मानिस मात्र यस्तो जीव हो जो इमोसनल बनेर रुन्छ अर्थात् दुख मानेर रुन्छ ।
पहिले हात्ती पनि मानिस झैँ इमोसनल भएर रुने मान्यता थियो । तर अहिलेसम्म यो कुराको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण फेला परेको छैन । मानिसहरु केवल दुखमा मात्र होइन कहिलेकाहीँ बढि खुसीमा समेत भावुक बनेर रुने गर्छ । शायद यस्तो चरित्र अरु कुनै पनि जिवमा हुँदैन । कतिपय मानिसको मान्यता के छ भने मानिस सामाजिक प्राणी हुनुका नाताले उसले कतिपय अवस्थामा रोएरै आफ्नो अनुभुति अभिव्यक्त गर्दछ । तर यो दाबीको पनि कुनै बलियो प्रमाण भेटिएको छैन । थाहा छ ? चाहे कम रुनुस् अथवा बढि रुनुस् तर एक न एक दिन रोएकै हुनुहुन्छ । कति मानिस कुरैकुरामा रुन्छन् भने कति मानिस फिल्म हेर्दा समेत आँशु चुहाउँछन् साँच्चीकै असह्य पीडा खप्न परेर धुरुधुरु रुनेहरु पनि प्रसस्तै हुन्छन् ।
सबैका रुने कारणहरु अलग अलग हुनसक्छन् । धेरै फिल्म हुन्छन् जो मानिसहरुलाई रुवाउनकै लागि बनाइएका जस्ता लाग्छन् । आम रुपमा महिलाहरु रुने कुरालाई सामान्य रुपमै लिइन्छ । तर पुरुषहरु रुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । पुरुषहरु रोएको कुरालाई नराम्रो मानिछ र यस्ता पुरुषलाई कातर भनिन्छ । तर दुनियामा अधिकांस पुरुषहरु पुरुष हुनुका बाबजुत पनि मज्जाले रुन्छन् महिलाझैँ । तर समग्रमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरु कम रुन्छन् । पुरुषहरु कम रुनुको कारण के हो त रुनुका फाइदा के के छन् ? आखिर मानिस किन रुन्छ ? यी प्रश्नहरु निकै उत्सुकताले भरिएका छन् ।
मनोविज्ञ विलियम फ्रेले सन् १९८२ मा गरेको एक अनुसन्धान अनुसार महिलाहरु औषतमा महिनामा ५ भन्दा बढि पटक रुन्छन् । तर पुरुषहरु भने महिनामा औषतमा डेढ पटक भन्दा बढि रुँदैनन् । महिलाहरु एक पटकमा रुँदा ५ देखि ६ मिनेटसम्म रुन्छन् भने पुरुषहरुले रुनका लागि एक पटकमा दुइ देखि ३ मिनेट खर्चिन्छन् । नेदरल्याण्डका मनोवैज्ञानिक एड विंगरहोएट्सले रुने विषयमा निकै धेरै अनुसन्धान गरे । उनका अनुसार रुवाइका विषयमा महिला र पुरुष बीचको यस्तो फरकपना बचपनदेखि नै आएको हुन्छ । बच्चा जन्मिने बेला चाहे त्यो छोरा होस् वा छोरी ऊ बराबर नै रुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार नवजात बच्चा रुनुको कारण आमालाई आफुतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउनु हो । जन्मिनेबेला उत्तिकै रुने महिला र पुरुषहरु किन उमेर बढ्दै जाँदा धेरै र थोरै रुन्छन् त ? यसमा समाजको फरक फरक माहोलको पनि हात हुन्छ ।
रुने कुरालाई खराब नमान्ने देशका मानिसहरु खुबै रुन्छन् । रुने कुरालाई नराम्रो मानिने देशका मानिसहरु पनि कम रुने गरेको पाइएको छ । अझ विंगरहोएट्सको अध्ययनले अर्को रोचक कुरा के पत्ता लगायो भन्दा गरीब भन्दा धनी देशका मानिसहरु बढि रुनेे गर्छन् । समाजको चरित्र मात्र होइन मानिसको रुने आनीबानीमा टेस्टेस्टेरोन नामक हर्मोनको सबैभन्दा ठूलो हात हुन्छ । प्रोस्टेट क्यान्सर भएर उपचार गराइरहेका मानिसहरु बढि रुने गर्छन् । यसको कारण के भने प्रोस्टेट क्यान्सर भएका मानिसहरुको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिका कारण मानिसमा टेस्टेस्टेरोन हर्मोनको उत्सर्जन कम हुन्छ । यो हर्मोनको कमीले मानिस बढि रुन्चे बन्दछ । जीवहरुमा मानिस मात्र यस्तो जीव हो जो इमोसनल बनेर रुन्छ अर्थात् दुख मानेर रुन्छ । पहिले हात्ती पनि मानिसझैँ इमोसनल भएर रुने मान्यता थियो । तर अहिलेसम्म यो कुराको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण फेला परेको छैन ।
मानिसहरु केवल दुखमा मात्र होइन कहिलेकाहीँ बढि खुशीमा समेत इमोसनल बनेर रुने गर्छ । शायद यस्तो चरित्र अरु कुनैपनि जिवमा हुँदैन । कतिपय मानिसको मान्यता के छ भने मानिस सामाजिक प्राणी हुनुका नाताले उसले कतिपय अवस्थामा रोएरै आफ्नो अनुभुति अभिव्यक्त गर्दछ । तर यो दाबीको पनि कुनै बलियो प्रमाण भेटिएको छैन । विभिन्न अध्ययनका विभिन्न खाले दाबी तथा निष्कर्ष भएपनि अहिलेसम्मको साझा तथ्य के हो भने रुनुको रहस्य अहिलेसम्म पनि रहस्यमै छ । आखिर मानिस किन रुन्छ? यो कुराको गुह्य पत्ता लगाउन अझैपनि अध्ययनको खाँचो छ । सायद त्यसपछि मात्र हामीले रुनुको कारण थाहा पाउनेछौँ । तर कारण थाहा नहुन्जेल चाहेको बेला मज्जाले रुनुस् । रुनाले तपाइँको मन पखालिन्छ र हलुका अनुभुति हुन्छ । तर जहाँ पायो त्यहीँ र स सानो कुरामा पनि कमजोर बनेर पिच्च रुने काम चाहीँ जाति होइन है ।
← के कारणले आँशु झर्छ ?
टुप्पी पाल्नुको बैज्ञानिक कारण के ? →